रूस र युक्रेन तनावबारे नेपालको औपचारिक धारणा सार्वजनिक, कसलाई के भन्यो ? — Sanchar Kendra
रूस र युक्रेन तनावबारे नेपालको औपचारिक धारणा सार्वजनिक, कसलाई के भन्यो ?
काठमाडौँ । रूस र युक्रेनबीच जारी तनावबारे नेपालले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
बिहीबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकसित भइरहेका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालले सबै पक्षलाई तनाव बढ्न नदिन उच्च संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुनुका नाताले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
रूसले केही दिनअघि युक्रेनका दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिनु राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत भएको पनि नेपालले उल्लेख गरेको छ।
उता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठकमा चीनले युक्रेनको मुद्दामाथि शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो पूर्ण रुपमा बन्द नभएको बताएको छ ।